Umhambeli wenqwelomoya waseHawaii okhutshwe emva kokuBethwa ngumkhweli
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » Umhambeli wenqwelomoya waseHawaii okhutshwe emva kokuBethwa ngumkhweli
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • HITA • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Umgibeli weenqwelomoya zaseHawaii ubanjiwe-Umfanekiso ngoncedo lweBill Paris
Ngo-7: 30 kusasa namhlanje, inqwelo-moya yaseHawaii i-HA152 ibuyiselwe kwisikhululo seenqwelomoya emva kokuba umgibeli ongalawulekiyo ebethe umntu ohamba ngenqwelomoya kungekudala emva kokunduluka.
Inqwelomoya indulukile kuDaniel K. Inouye kwisikhululo senqwelomoya esiya eHilo kwisiqithi esikhulu.
Umgibeli wenqwelomoya wathi isehlo senzeke kufutshane nomphambili wenqwelomoya.
Isithethi senqwelomoya saseHawaii sithe, "umgibeli uhlasele omnye wabasebenzi bethu kwinqwelo-moya, owayehamba ngendlela, kwisehlo esingakhange sibekho."
Inqwelomoya indulukile kuDaniel K. Inouye kwisikhululo senqwelomoya esiya eHilo kwisiqithi esikhulu. Ngokwesithethi seenqwelo moya zaseHawaii uAlex Da Silva, "umgibeli uhlasele omnye wabakhweli bethu, owayehamba indlela, kwisehlo esingakhange sibekho."
Ukufika kwabo, amaSekela eSheriff kaRhulumente akhwela inqwelomoya apho indoda eyayikhwele indoda eneminyaka engama-32 yabanjwa ngezityholo zokuhlaselwa ngenqanaba lesithathu nxamnye nelungu labasebenzi kwaye yasuswa kwindiza.
Umgibeli wenqwelomoya, uBill Paris, uthe esi sehlo senzekile kufutshane nephambi kwendlwana yenqwelomoya.
Isithethi somoya waseHawaii uDa Silva uthe, "Umncedisi wethu wenqwelomoya wavavanywa wakhululwa emsebenzini ukuze aphumle."
USenator wase-Hawaii uBrian Schatz, onguSihlalo we-Senate Appropriations Subcommittee on Transportation, wathi: “Olu hlaselo luphosakele. Umhlaseli kufuneka abenoxanduva kwaye atshutshiswe ngokomthetho. Kufuneka kungabikho nyamezelo kolu hlaselo lucekisekayo. ”
I-Federal Aviation Administration (i-FAA) izakuphanda eso sehlo.
Ngelishwa, akukho Ntsha
Ngokwe-FAA, ukubhabha kwezi ntsuku ze-COVID-19 kuxinzelelo ikakhulu kubasebenzi kunye nakubakhweli, ngakumbi ngaphezulu kokunxiba imaski. I-Federal Aviation Administration inike ingxelo yokuba kunyaka ophelileyo, bekukho iingxelo zabakhweli ezingama-4,385 ezingalawulekiyo ezingama-3,199 zezehlo ezinxulumene nemaski.
Kwesinye inqaku namhlanje ku eturbonews, kwaxelwa ukuba i-Federal Air Marshals ifundisa abagadi beenqwelomoya ukuba bajongane njani nomngcipheko okhulayo wabakhweli abathanda ukulwa nabanogonyamelo, ngokufuthi ngenxa yemithetho yokugquma ubuso.
Ulawulo loKhuseleko kuThutho (TSA) isungule imaski yobuso efunekayo kubantu abathile kuthungelwano lwezothutho kulo lonke elaseMelika ngoFebruwari walo nyaka, kubandakanywa izikhululo zeenqwelo moya, iinqwelomoya zokurhweba, iibhasi ezihamba ezindleleni, nakwiibhasi zabakhweli kunye neenkqubo zikaloliwe.
Amaziko oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo (CDC) kutsha nje abhengeze ukuba abagonyo abagonywe ngokupheleleyo abagonywe nge-FDA banokuhamba ngokukhuselekileyo ngaphakathi e-US. Nangona kunjalo, izikhokelo zeCDC zisafuna abantu ukuba banxibe imaski yobuso, umgama ekuhlaleni, kwaye bahlambe izandla zabo okanye basebenzise isicoci sezandla.